အမျိုးသမီးများ ဆံကေသာ သန်စွမ်းစေဖို့ လျှိ်ု့ဝှက်ချက်များ – WunYan
အမျိုးသမီးများ ဆံကေသာ သန်စွမ်းစေဖို့ လျှိ်ု့ဝှက်ချက်များ
Posted on December 4, 2018 by whuk-46651
ဆံသားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာလိုပါသလား။ ဆံကေသာကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေလိုပါသလား။ ကောင်းမွန်တဲ့ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါက အလှပြင်ဆိုင်တွေသွားပြီး ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရတဲ့ ဒုက္ခတွေကနေ ကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလျှော်တာဟာ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ အထင်ရှိကြပေမယ့်လည်း တကယ်တော့ ဆံပင်ကို တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ (သို့) ထို့ထက်ပိုကြာအောင်ထားပြီးမှ လျှော်သင့်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ရေထဲမှာပါတဲ့ ကလိုရင်းဓာတ်၊ ဆားဓာတ်တွေဟာ ဆံကေသာမှာရှိတဲ့ သဘာဝအဆီတွေကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့တိုင်းခေါင်းလျှော်ပါက ဆံပင်တွေမာပြီးကြမ်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဆံသားပျက်စီးမှုမှာကာကွယ်ရန် ရက်တော်တော်ခြားပြီးမှသာ ခေါင်းလျှော်သင့်တဲ့အပြင် ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း အဆီထုတ်လုပ်နှုန်းကိုလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
2. ဆံပင်ကို ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ပါ
ခေါင်းမလျှော်ထားတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင် ပုံစံပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ ဆံပင်ကို ထုံးဖွဲ့ချည်နှောင်လိုကြမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သားရေကွင်းနဲ့ ဆံပင်ကိုတင်းကြပ်စွာချည်နှောင်ခြင်းဟာ ဆံပင်ကိုကျိုးကြေပျက်စီးနိုင်တာကြောင့် ကျစ်ဆံမြီးဖွဖွကျစ်ခြင်း၊ ဆံထုံးထုံးခြင်းများဟာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးနေသယောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကျစ်ဆံမြီးထုံးဖွဲ့မှုပုံစံဟာ သာမန်စုစည်းထားတဲ့ ဆံပင်ထက်ပိုကြည့်ကောင်းတာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
3. ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်များကို အသုံးပြုပါ
အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေဟာ ဆံသားကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေ၍ ဆံပင်ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ရေဓာတ်ကိုလည်းဖြည့်ပေး၍ ပရိုတင်းနဲ့အစိုဓာတ်တွေကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
4. ခေါင်းလျှော်ရည်ကို နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုပါ
ခေါင်းလျှော်ရည်ထည့်၍ ရေဆေးချခြင်းကို နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ အဆီထွက်တဲ့ ဆံသားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါက နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်သာ ခေါင်းလျှော်ဖို့လိုအောင် ခေါင်းလျှော်ရည်ကို နှစ်ခါသုံးပေးပါ။ ဒုတိယအကြိမ် ခေါင်းလျှော်ရည်ထည့်တဲ့အချိ်န်မှာ အမြှုပ်ပိုထွက်တာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဆံပင်တွေပိုမိုသန့်စင်သွားပြီးဆိုတာ ပြသတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံသားပျော့ဆေးကိုမူ ဒုတိယအကြိမ်ခေါင်းလျှော်ရည်အသုံးပြုပြီးပါမှ နောက်ဆုံးတွင် တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုပေးပါ။
5. ဆံပင်ပေါင်းဆေးကို အသုံးပြုပါ
ဆေးဆိုးတာကြောင့် ပျက်စီးနေတဲ့ဆံပင်တွေ၊ အဖျားနှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့ ဆံပင်တွေ၊ ကျိုးကြေနေတဲ့ ဆံပင်တွေအတွက် စိုဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ ပေါင်းဆေးတွေလိုအပ်ပါတယ်။ ဆံကေသာသန်စွမ်းဖို့အတွက် ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့အတူ တစ်ပတ်တစ်ခါ ဆံပင်ပေါင်းဆေးကို အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။ ဆံသားကို အာဟာရဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ ပေါင်းတင်ဆေးဟာ ဆံကေသာမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အရာမှန်သမျှကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်စွမ်းရှိ်ပါတယ်။
6. နူးညံ့တဲ့ ဘီးကိုသာအသုံးပြုပါ
ပလတ်စတစ်ဘီးတွေနဲ့ ဆံပင်ကို ကြမ်းတမ်းစွာဖြီးခြင်းဟာ ဆံသားကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမွှေးကျဲကျဲ၊ နုနု နှင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ လှော်တက်သဏ္ဍာန်ဘီးတွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဆံသားထိခိုက်မှုကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းမလျှော်မီ အသွားကျဲဘီးများဖြင့် ဖြီးသင်ခြင်းဖြင့် ဆံပင်ရှုပ်ထွေးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
7. အပူခံကာကွယ်ဆေးများကို အမြဲဆောင်ထားပါ
အပူခံဖျန်းဆေး (သို့) အဆီတွေဟာ ဆံပင်ခြောက်ခံစက်၊ ဆံပင်ဖြောင့်စက်နဲ့ အခြားအပူပေးကိရိယာတွေကြောင့် ဆံသားပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပြီးနောက် အပူခံဆေးတွေကို ဆံပင်အရင်မှ အဖျားထိလိမ်းပေးပြီး ဘီးနဲ့သေချာစွာဖီးချပါ။ ဆံပင်မခြောက်တစ်ခြောက် အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် အပူခံဆေးတွေဟာ ဆံပင်မှာကပ်ငြိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် ဘီးအဝိုင်း (သို့) လှော်တက်သဏ္ဍာန်ဘီးတွေကို အသုံးပြုပြီး ပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။ သတိပြုရန်ကတော့ ဆံပင်ဖြောင့်စက်၊ ကောက်စက်တွေအသုံးမပြုမီ အပူခံဖျန်ဆေးကို ထပ်မံအသုံးပြုပေးဖို့လိုပါတယ်။
8. အပူချိန်အနိမ့်ဆုံးဖြင့်သာ ပုံသွင်းပါ
ဆံပင်အခြောက်ခံစက်မှ မြင့်မားလွန်တဲ့ အပူချိန်ကြောင့် ဆံသားတွေကို ကျွတ်ဆတ်စေကာ ကျိုးကြေပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအသုံးပြုတဲ့ နည်းပညာအဆင့်မြင့်အခြောက်ခံစက်တွေဟာ အလွန်ပူတာကြောင့် ထိုပစ္စည်းမျိုးကို အိမ်မှာအသုံးပြုခြင်းဟာ ကိုယ့်ဆံပင်ကိုယ်လောင်ကျွမ်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန်နိမ့်တဲ့ပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်းဟာ ဆံပင်ခြောက်ဖို့အချိန်ပိုကြာတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း မြင့်မားတဲ့အပူကိုရှောင်လွှဲနိုင်တာကြောင့် ဆံသားပျက်စီးမှုကို ရေရှည်မှာကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာမြင့်အကောင်းစား ဆံပင်အခြောက်ခံစက်တွေကို ဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း ဆံပင်ခြောက်ဖို့အချိန်ကို ပိုမိုတိုတောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
9. ဆံပင်ဖြောင့်စက်အသုံးပြုပါက အလောမကြီးပါနှင့်
ဆံပင်ဖြောင့်စက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အချိန်ကုန်သက်သာစေနိုင်ဖို့အတွက် ဆံပင်တွေအများကြီးယူပြီး အမြန်လုပ်တာဟာ တကယ်တော့အချိန်ပိုကုန်တဲ့အပြင် ဆံသားကိုလည်း ပိုမိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေဟာ အပူစက်နဲ့ တစ်ခါတွေ့တိုင်း တစ်ခါပိုပြီးပျက်စီးနိုင်တာကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ အပူပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆံပင်တွေကို မထိတွေ့ပါစေနှင့်။ ဦးစွာပထမ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်နဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ဆံပင်ကိုဖြောင့်နေအောင်ပုံသွင်းပါ။ ပြီးလျှင် ဆံပင်ကိုနည်းနည်းချင်းစီသာယူ၍ ဖြောင့်စက်ဖြင့်ဖိချပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဆံပင်ပုံစံကိုလည်းပိုမိုလှပစေတဲ့အပြင် ခဏခဏလည်းပြန်လုပ်ဖို့မလိုတာကြောင့် ဆံသားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ တခြားဆဲလ်တွေလိုပဲ ဆံပင်အရင်းအမြစ်တွေဟာ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့အတွက် ရေဓာတ်လိုအပ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်များလေလေ၊ ဆံပင်ကိုပိုရောက်လေလေဖြစ်တာကြောင့် ဆံသားတွေပိုမိုသန်စွမ်းလာတာကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ရေသောက်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုပါက ရေဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ဖရဲသီးနဲ့ မုန်လာဥနီ ကဲ့သို့အစားအစာများကို သရေစာအနေနဲ့ စားပေးနိုင်ပါတယ်။
Credit: Dr. Thinzar Wynn
beautiful girl combs her hair Asian appearance
အမြိုးသမီးမြား ဆံကသော သနျစှမျးစဖေို့ လြှို့ဝှကျခကျြမြား
ဆံသားပွုပွငျထိနျးသိမျးမှုတှအေတှကျ ငှကေုနျကွေးကသြကျသာလိုပါသလား။ ဆံကသောကို ကနျြးမာသနျစှမျးစလေိုပါသလား။ ကောငျးမှနျတဲ့ဆံကသောကို ပိုငျဆိုငျထားပါက အလှပွငျဆိုငျတှသှေားပွီး ပုံမှနျပွုပွငျထိနျးသိမျးရတဲ့ ဒုက်ခတှကေနေ ကငျးဝေးစမှောဖွဈပါတယျ။
နစေ့ဉျနတေို့ငျးလြှျောတာဟာ တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးအတှကျ အရေးကွီးတယျလို့ အထငျရှိကွပမေယျ့လညျး တကယျတော့ ဆံပငျကို တဈရကျခွားတဈခါ (သို့) ထို့ထကျပိုကွာအောငျထားပွီးမှ လြှျောသငျ့ပါတယျ။ ခေါငျးလြှျောရညျနဲ့ ရထေဲမှာပါတဲ့ ကလိုရငျးဓာတျ၊ ဆားဓာတျတှဟော ဆံကသောမှာရှိတဲ့ သဘာဝအဆီတှကေို ဖယျရှားပဈလိုကျနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နတေို့ငျးခေါငျးလြှျောပါက ဆံပငျတှမောပွီးကွမျးလာနိုငျပါတယျ။ ဆံသားပကျြစီးမှုမှာကာကှယျရနျ ရကျတျောတျောခွားပွီးမှသာ ခေါငျးလြှျောသငျ့တဲ့အပွငျ ဦးရပွေားကို နှိပျနယျပေးခွငျးဖွငျ့လညျး အဆီထုတျလုပျနှုနျးကိုလြော့ကစြနေိုငျပါတယျ။
2. ဆံပငျကို ဆငျယငျထုံးဖှဲ့ပါ
ခေါငျးမလြှျောထားတဲ့နတှေ့မှောဆိုရငျ ပုံစံပွောငျးတဲ့အနနေဲ့ ဆံပငျကို ထုံးဖှဲ့ခညျြနှောငျလိုကွမှာအမှနျပငျဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သားရကှေငျးနဲ့ ဆံပငျကိုတငျးကွပျစှာခညျြနှောငျခွငျးဟာ ဆံပငျကိုကြိုးကွပေကျြစီးနိုငျတာကွောငျ့ ကဈြဆံမွီးဖှဖှကဈြခွငျး၊ ဆံထုံးထုံးခွငျးမြားဟာ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။ ရှုပျထှေးနသေယောငျပွုလုပျထားတဲ့ ကဈြဆံမွီးထုံးဖှဲ့မှုပုံစံဟာ သာမနျစုစညျးထားတဲ့ ဆံပငျထကျပိုကွညျ့ကောငျးတာလညျး အမှနျပငျဖွဈပါတယျ။
3. ရဓောတျဖွညျ့ပေးတဲ့ ခေါငျးလြှျောရညျမြားကို အသုံးပွုပါ
အစိုဓာတျကိုထိနျးသိမျးပေးနိုငျတဲ့ ခေါငျးလြှျောရညျတှဟော ဆံသားကိုကနျြးမာသနျစှမျးစေ၍ ဆံပငျပကျြစီးမှုမှ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ ထို့ပွငျ ရဓောတျကိုလညျးဖွညျ့ပေး၍ ပရိုတငျးနဲ့အစိုဓာတျတှကေိုလညျး ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။
4. ခေါငျးလြှျောရညျကို နှဈကွိမျအသုံးပွုပါ
ခေါငျးလြှျောရညျထညျ့၍ ရဆေေးခခြွငျးကို နှဈကွိမျပွုလုပျပါ။ အဆီထှကျတဲ့ ဆံသားကိုပိုငျဆိုငျထားပါက နှဈရကျတဈကွိမျသာ ခေါငျးလြှျောဖို့လိုအောငျ ခေါငျးလြှျောရညျကို နှဈခါသုံးပေးပါ။ ဒုတိယအကွိမျ ခေါငျးလြှျောရညျထညျ့တဲ့အခြိနျမှာ အမွှုပျပိုထှကျတာကို သတိထားမိပါလိမျ့မယျ။ ဒါဟာ ဆံပငျတှပေိုမိုသနျ့စငျသှားပွီးဆိုတာ ပွသတဲ့အခကျြပဲဖွဈပါတယျ။ ဆံသားပြော့ဆေးကိုမူ ဒုတိယအကွိမျခေါငျးလြှျောရညျအသုံးပွုပွီးပါမှ နောကျဆုံးတှငျ တဈကွိမျသာအသုံးပွုပေးပါ။
5. ဆံပငျပေါငျးဆေးကို အသုံးပွုပါ
ဆေးဆိုးတာကွောငျ့ ပကျြစီးနတေဲ့ဆံပငျတှေ၊ အဖြားနှဈခှဖွဈနတေဲ့ ဆံပငျတှေ၊ ကြိုးကွနေတေဲ့ ဆံပငျတှအေတှကျ စိုဓာတျမွငျ့မားစှာပါဝငျတဲ့ ပေါငျးဆေးတှလေိုအပျပါတယျ။ ဆံကသောသနျစှမျးဖို့အတှကျ ရဓောတျဖွညျ့ပေးတဲ့ ခေါငျးလြှျောရညျနဲ့အတူ တဈပတျတဈခါ ဆံပငျပေါငျးဆေးကို အသုံးပွုပေးသငျ့ပါတယျ။ ဆံသားကို အာဟာရဖွညျ့ပေးနိုငျတဲ့ ပေါငျးတငျဆေးဟာ ဆံကသောမှာဆုံးရှုံးသှားတဲ့ အရာမှနျသမြှကို ပွနျလညျဖွညျ့တငျးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
6. နူးညံ့တဲ့ ဘီးကိုသာအသုံးပွုပါ
ပလတျစတဈဘီးတှနေဲ့ ဆံပငျကို ကွမျးတမျးစှာဖွီးခွငျးဟာ ဆံသားကိုပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမှေးကြဲကြဲ၊ နုနု နှငျ့ ပွုလုပျထားတဲ့ လှျောတကျသဏ်ဍာနျဘီးတှကေို အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ ဆံသားထိခိုကျမှုကို သကျသာစမှောဖွဈပါတယျ။ ခေါငျးမလြှျောမီ အသှားကြဲဘီးမြားဖွငျ့ ဖွီးသငျခွငျးဖွငျ့ ဆံပငျရှုပျထှေးခွငျးမှ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။
7. အပူခံကာကှယျဆေးမြားကို အမွဲဆောငျထားပါ
အပူခံဖနျြးဆေး (သို့) အဆီတှဟော ဆံပငျခွောကျခံစကျ၊ ဆံပငျဖွောငျ့စကျနဲ့ အခွားအပူပေးကိရိယာတှကွေောငျ့ ဆံသားပကျြစီးမှုကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ မကျြနှာသုတျပုဝါနဲ့ ခွောကျသှအေ့ောငျသုတျပွီးနောကျ အပူခံဆေးတှကေို ဆံပငျအရငျမှ အဖြားထိလိမျးပေးပွီး ဘီးနဲ့သခြောစှာဖီးခပြါ။ ဆံပငျမခွောကျတဈခွောကျ အခြိနျဖွဈတာကွောငျ့ အပူခံဆေးတှဟော ဆံပငျမှာကပျငွိနမှောဖွဈပါတယျ။ ထို့နောကျ ဘီးအဝိုငျး (သို့) လှျောတကျသဏ်ဍာနျဘီးတှကေို အသုံးပွုပွီး ပုံသှငျးနိုငျပါတယျ။ သတိပွုရနျကတော့ ဆံပငျဖွောငျ့စကျ၊ ကောကျစကျတှအေသုံးမပွုမီ အပူခံဖနျြဆေးကို ထပျမံအသုံးပွုပေးဖို့လိုပါတယျ။
8. အပူခြိနျအနိမျ့ဆုံးဖွငျ့သာ ပုံသှငျးပါ
ဆံပငျအခွောကျခံစကျမှ မွငျ့မားလှနျတဲ့ အပူခြိနျကွောငျ့ ဆံသားတှကေို ကြှတျဆတျစကော ကြိုးကွပေကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှအေသုံးပွုတဲ့ နညျးပညာအဆငျ့မွငျ့အခွောကျခံစကျတှဟော အလှနျပူတာကွောငျ့ ထိုပစ်စညျးမြိုးကို အိမျမှာအသုံးပွုခွငျးဟာ ကိုယျ့ဆံပငျကိုယျလောငျကြှမျးစတောပဲဖွဈပါတယျ။ အပူခြိနျနိမျ့တဲ့ပစ်စညျးကို အသုံးပွုခွငျးဟာ ဆံပငျခွောကျဖို့အခြိနျပိုကွာတယျဆိုပမေယျ့လညျး မွငျ့မားတဲ့အပူကိုရှောငျလှဲနိုငျတာကွောငျ့ ဆံသားပကျြစီးမှုကို ရရှေညျမှာကာကှယျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ နညျးပညာမွငျ့အကောငျးစား ဆံပငျအခွောကျခံစကျတှကေို ဝယျယူအသုံးပွုခွငျးဖွငျ့လညျး ဆံပငျခွောကျဖို့အခြိနျကို ပိုမိုတိုတောငျးစနေိုငျပါတယျ။
9. ဆံပငျဖွောငျ့စကျအသုံးပွုပါက အလောမကွီးပါနှငျ့
ဆံပငျဖွောငျ့စကျအသုံးပွုတဲ့အခါမှာ အခြိနျကုနျသကျသာစနေိုငျဖို့အတှကျ ဆံပငျတှအေမြားကွီးယူပွီး အမွနျလုပျတာဟာ တကယျတော့အခြိနျပိုကုနျတဲ့အပွငျ ဆံသားကိုလညျး ပိုမိုပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ ဆံပငျတှဟော အပူစကျနဲ့ တဈခါတှတေို့ငျး တဈခါပိုပွီးပကျြစီးနိုငျတာကွောငျ့ တတျနိုငျသမြှ အပူပစ်စညျးတှနေဲ့ ဆံပငျတှကေို မထိတှပေ့ါစနှေငျ့။ ဦးစှာပထမ ဆံပငျအခွောကျခံစကျနဲ့ တတျနိုငျသမြှ ဆံပငျကိုဖွောငျ့နအေောငျပုံသှငျးပါ။ ပွီးလြှငျ ဆံပငျကိုနညျးနညျးခငျြးစီသာယူ၍ ဖွောငျ့စကျဖွငျ့ဖိခပြါ။ ထိုသို့ပွုလုပျခွငျးဟာ ဆံပငျပုံစံကိုလညျးပိုမိုလှပစတေဲ့အပွငျ ခဏခဏလညျးပွနျလုပျဖို့မလိုတာကွောငျ့ ဆံသားပကျြစီးဆုံးရှုံးမှုမှလညျး သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ တခွားဆဲလျတှလေိုပဲ ဆံပငျအရငျးအမွဈတှဟော ကနျြးမာသနျစှမျးဖို့အတှကျ ရဓောတျလိုအပျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ ရဓောတျမြားလလေေ၊ ဆံပငျကိုပိုရောကျလလေဖွေဈတာကွောငျ့ ဆံသားတှပေိုမိုသနျစှမျးလာတာကိုတှရေ့နိုငျပါတယျ။ အကယျ၍ ရသေောကျဖို့အခကျအခဲရှိတယျဆိုပါက ရဓောတျကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ ဖရဲသီးနဲ့ မုနျလာဥနီ ကဲ့သို့အစားအစာမြားကို သရစောအနနေဲ့ စားပေးနိုငျပါတယျ။